Kunqatshwe ilobolo lokamculi kamaskandi | isiZulu
Kunqatshwe ilobolo lokamculi kamaskandi
Ngabe uJub Jub uyazi ukuthi bekubulawa uVan Damme?
Kungenzeka "kuhlukane unyaka" sisabulala uVan Damme
Durban - Kakuvumi nokuthi ukhulume umndeni wesihlabani sikamasikandi okuchithwe ilobolo lawo njengoba ubuthi uyokhokhela indodana yawo, uzishaye ziphelele, kodwa washaywa ngesithende kwathiwa ungabe usazihlupha ngezinkomo, kubika iphephandaba ILANGA.
Umndeni kaSthembiso Mroza Fakude waseMkhuze eMkhanyakude, enyakatho yeKwaZulu-Natal, utshele ILANGA ukuthi uphoxekile njengoba ubuzimisele ngokuyolobola kwaMvubu KwaHlabisa, okuyikoninalume balo mculi, kodwa wachithwa kwathiwa mawuyeke ngoba kukhona osugaqele ukukuhlomula ngaye.
Uyise kaMroza, uMnu Guza Moses "Nkunzeneshoba" Fakude, uthi kuyamhlukumeza ukuthi kakukhulunywa lutho ngaye empulelweni yendodana yakhe.
Ukusho lokhu emcimbini obungoMgqibelo eSibhojeni KwaHlabisa, wokuhalalisela indodana yakhe ngempumelelo yayo - njengoba ingoma yayo ethi "Ngelamanqamu" ihlukanise unyaka
Uthi kuyiqiniso ukuthi ubengakaze amhlawule uMroza njengoba ekhulele koninalume kodwa uma esefuna ukwenza lokho akasiboni isidingo sokuthi avinjwe.
"Kunabantu abangahlobene ngisho nengane yami okuyibona abatshele umndeni wakwaMvubu ukuthi ingavunywa le nto esizama ukuyenza. Indlela osekwenzeka ngayo sekungathi uMroza waqhuma ehlathini, akanaye uyise, kukhona konke okwenzekayo thina kasazi lutho. Kwawona umculo lona le ngane iwuqale phambi kwami ihlala nami kwami," kusho uMnu Fakude.
Ukusho lokho emi nabafowabo abebethukuthele begane unwabu bethi kwawona lo mcimbi obuwenzelwa lo mculi ngoMgqibelo, kabazange batshelwe ngayo.
Bathe okwenze ukuba bathathe isikhathi eside ukuyokhokha kwaMvubu wukuthi bebesabeka isenti phezu kwelinye.
"Yithina esisukumile ngoba sizwa kuxoxwa ngalo mcimbi sesibona nesikhathi sihamba ekubeni singatsheliwe ngawo ngendlela ehloniphekile," kusho uMnu Fakude.
Utshele leli phephandaba ukuthi uMroza ufike kuyena eMkhuze eneminyaka eli-11 ubudala, wamkhulisa kwaze kwaba uyozifunela amatoho esilungwini.
OLUNYE UDABA: Kuvele ukuthi ngeyakhe ingane abeyiphika umlingisi
ILANGA lithole ukuthi bekudonsiswana ngalo mcimbi ngaphambi kokuba wenzeke njengoba kubikwa ukuthi abakubo bebefuna wenzelwe eMkhuze, abakoninalume bashaya phansi ngonyawo.
UMnu Bhili Fakude okungomfowabo kayise kaMroza, uthi kabakaze banikezwe ngisho ithuba lokudlulisa amazwi okubongela ingane yabo kodwa sekuqhakanjiswa abathile.
"Le ngane ngeyethu, ikhuliswe yithina. Umfowethu akakaze ayilahle nangelilodwa ilanga kodwa ibikhulele koninalume sayithatha ngoba yayingesenamuntu njengoba unina wahamba wayishiya incane wayogana KwaNongoma. Namhlanje sekungathi thina sesigaqele okuthile. Isiphathe kabi le nto eyenziwayo ngoba kwawona lo mndeni ululekwa ngabantu abathole uMroza esecula, sebenza sengathi bazi kakhulu ngaye. Kasazi ukuthi bangena kuphi ezindabeni zethu," kusho yena.
Unina kaMroza, uNkz Sibongile Mvubu, uthi balichithile ilobolo ngoba bese siside isikhathi lingakhishiwe.
Uthi abakwaFakude bazozwa ngabakwaMvubu uma sekumele bayokhokha.
"Bekuthi uma sekumele alobole uyise, abeke izaba noma ngingazi-ke ukuthi bekwenziwa yini lokho. Kasivumanga impela, sithe makudlule yonke le nto kaMroza eyenziwayo bese sibatshela uma sesikhululekile," kusho uNkz Mvubu.